के तपाईलाई ढाड दुख्ने समस्या छ ? अपनाउनुहोस् यी उपाय – NepalDailyPost
नेपाल डेली पोस्ट २०७६, १२ भाद्र बिहीबार २०:१६
के तपाईलाई ढाड दुख्ने समस्या छ ? अपनाउनुहोस् यी उपाय
एजेन्सी, काठमाडौं। अहिले रोग बिना नै मानिसलाई ढाड दुख्ने गर्दछ । ढाड दुख्ने नै एउटा रोग झै भएको छ । कम उमेरका ब्यक्तिमा पनि ढाड दुख्ने समस्याले सताउने गरेको पाईन्छ । तपाईंपनी कतै यस्तै रोगको सिकार त हुनुहुन्न रु यदी तपाईको पनि ढाड दुख्ने समस्या छ भने यस्तो गर्नुस् ।
मनतातो पानीमा सीधे नून हालेर नुहाउनुस् । यसले आराम दिन्छ ।तावामा ज्वानोलाई हल्का भुटेर चपाईचपाई खानुस् । यसले पनि ढाड दुख्नबाट जोगाउँछ ।जाडोका कारण ढाड दुखिरहेको छ भने सुकेको अञ्जीर, सुकेको खुबानी र पाँचवटा सुकेको आरुबखडा राति सुत्नुअघि चपाएर खानुस् । यसो गर्दा पनि ढाड दुख्ने समस्या केही दिनमा निको हुन्छ ।
एक चम्चा महमा दालचिनीको धूलो एक ग्राम हालेर बिहान बेलुका दिनमा दुईचोटि खानुस् । आराम हुन्छ ।तातो पानीले सेक्दा पनि पीडाबाट मुक्ति पाइन्छ ।
PREVIOUS Previous post: सुनका गरगहनासहित ६ लाख बराबरकाे धनमाल चोरी
NEXT Next post: विज्ञापन विधेयक बहुमतले पारित, सबैलाई समानुपातिक रुपमा विज्ञापन उपलब्ध गराउने : मन्त्री बाँस्कोटा